Angovo avy amin’ny masoandro : hamokarana 20 Mw ny avy ao Ihazolava Ambatolampy | NewsMada
Angovo avy amin’ny masoandro : hamokarana 20 Mw ny avy ao Ihazolava Ambatolampy
Mandeha ny asa ataon’ny Green Yellow, any Ihazolava Ambatolampy, tafiditra ao anatin’ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny tsy miankina, momba ny famokarana angovo. Tonga nitsidika izany asa izany, omaly, ny minisitry ny Angovo, rano sy ny akoranafo, Rasoloelison Lantoniaina sy ireo tompon’andraikitra samihafa avy amin’ny minisitera sy ny Jirama.
Nahazo fifanarahana avy amin’ny fanjakana ny orinasa Green Yellow hitrandraka angovo azo avy amin’ny masoandro, amin’ny alalan’ny «panneaux photovoltaïques», hanome hery 20 Mw. Hampifandraisina amin’ny tambajotran’ny Jirama izany, mamatsy ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra. Manadio ny faritra sy mametraka fotodrafitrasa hametrahana izany ny Colas. “Hampihena betsaka ny fampiasana solika izao, afaka fotoana fohy, tsy hampiasa gazoala intsony isika fa solika mavesatra”, hoy ny minisitra Rasoloelison Lantoniaina.
Hatao ny asa fanajariana rehetra hatramin’ny volana oktobra, ho an’ireo fitaovana (panneaux) miiasa 75.000 hapetraka amin’izany toerana izany. Araka ny nandrafetana ny lamin’asa, tokony ho vita tanteraka amin’ny volana jona 2018 ny asa rehetra ary hamokatra herinaratra vaovao manomboka amin’io fotoana io. Amin’izao fotoana fanaovana ny asa izao, efa manomboka mahita tombontsoa ny mponina eny an-toerana, noho ny asa vaovao omena azy ireo, hitombo hatrany izany mandritra ny fihodin’ny orinasa, araka ny fanazavana nomen’ny mpitantana ao amin’ny Green Yellow.
Tsy hijanona eo ny tetikasa fa hitohy any amin’ny faritra hafa. Manomboka ny fanadihadiana izany. Efa misy ny fotodrafitrasa, tahaka izao, any Maevatanana, vita ny taona 2016, tantanan’ny orinasa vahiny roa : First Energy sy Serris Engeneering. Iaraha-mahalala fa mety tsara any amin’iny faritra be masoandro iny izany tetikasa izany. Ireo angovo avy amin’ny masoandro trandrahin’ny orinasa roa ireo mamatsy an’i Maevatanana mandritra ny andro, manampy ny famatsiana ireo milina mbola mandeha amin’ny solika. Tetikasa hafa fanampiny any Betsiboka ihany ny hanamboarana tohodrano hamokarana angovo.